Zvakadii nezve smart tambo dzeApple Watch? | Ndinobva mac
Iwe ungafungei nezve smart tambo dzeApple Watch?
Iwe waizofungei kana mune ramangwana zvimhete zveApple Watch zvaive nemukana wekuve nhevedzano yemaitiro akanyudzwa anozovashandura kuita tambo dzakangwara? Kuti ivo vagone kuendesa akasiyana manzwiro kune avo vashandisi, kuburikidza neakavanzika kwazvo asi akakwana kudedera. Zvinotaridza kuti zvinogona kuve chokwadi sekureba sekunge patent iyi yakanyoreswa neApple ichiitwa. Pfungwa ndeyekuti iwe unogona kudyidzana newachi, zvakare kuburikidza netambo.
Sezvakatsanangurwa mune itsva patent yakanyoreswa nekambani yeAmerica, Apple yaigona kushandisa inki nemagetsi zvikamu. Izvi zvinogona kupa vashandisi imwe nzvimbo yekuisa kana kupa haptic mhinduro. Kubudikidza neApple Watch tambo, isu tinogona kuve nekutenderera kwakatenderedza ruoko rwese uye kwete kwete chete kumusoro, sepakutanga.
Iyo Apple Watch hachisi chinhu hombe, saka mota dzinoitisa kuti idedere, hadzisi. Asi kana Apple ikaita ichi patent chaicho, mikana yacho yaizowanda zvakanyanya. Mushandisi aigona kuona zviziviso kana kufona nenzira yakazara. Haptic mhinduro Ivo vanobatsira pane dzimwe nguva asi mhinduro dzavo dzakapfava. Nekudaro neingi yemagetsi, yaizonyanya kushanda nekuti yaizokwira zvakanyanya padhuze neganda uye nekudaro vaizoonekwa zvakanyanya.
Iyo patent inonzi «Magetsi zvigadzirwa zvine piezoelectric inki». Mariri, Apple inoona kushandiswa kweiyi tekinoroji nenzira isingareve kushandiswa kwayo seyakajairika vibration chinhu mukati mekesi. Apple inoratidza kuti ingashandiswa sei mune izvo zvinongedzo uko vashandisi vanobata mudziyo kazhinji. Kunyanya, iyo patent inotaura nezve maitiro ekugadzirisa akasiyana emagetsi zvikamu, seApple inoratidza kuti zvinogona kunge zvisingaite kuwedzera imwe neumwe kunzvimbo kana zvigadzirwa nenzira zvakajairwa.
Mhinduro yeApple yemabhande ayo akangwara ari ese-pamusoro pemagetsi zvikamu.
Kugadzirisa nzira yekuisa zvikamu zvemagetsi mumabhanhire, zvave zvichifungidzirwa kuti zviparadzire zvikamu izvi kuburikidza ne bhainda . zvinhu, inoshandura magetsi simba kuva magetsi.
Iko kushandiswa kwekuteedzera pamwe neaya akangwara tambo yeanouya Apple Watch kunogona kupa yakanyanya kusanzwisisika tactile mhinduro, inonzwika nemushandisi kuburikidza yakanangana nekubatana neiko ruoko. Izvi zvinogona kuiswa munzvimbo dzakananga dzechiuno, senzvimbo dzakatarisa mukati. Ivo vanowanzo kuve vanonzwisisa kune diki kudedera. Mumwe muenzaniso urikushandisa musanganiswa wekutwasuka uye wehunyambiri marara pane gridhi.
Uye zvakare, zvinhu zvakagadzirwa nemagetsi zvikamu zvakare inogona kuburitsa simba kubva pakumanikidza. Ndokusaka zvichikwanisika kuti iwo iwo magetsi emagetsi agadzire chiratidzo chinoverengeka nemaseketi ekudzora kana mushandisi akadzvanya kiyi. Sisitimu yakadai yaizobvisa kudiwa kwechinyakare kiyi mashini uye yaigona kubvumidza kugadzirwa kweslimimmer makhibhodi
Zvingave zvakanaka kugona kuona chimwe chinhu chakadai. Kunyanya sezvo iyi mhando ye patent uye tekinoroji zvaigona ishandiswe kune mamwe majaira senge semuenzaniso iyo iPad kana Mac. Fungidzira uchikwanisa kunakidzwa neApple Penzura nerudzi urwu rwemagetsi zvikamu. Fungidzira iyo paTrackPad pane yako Mac uye inodzosera mhinduro idzodzo kwauri sekuzungunuka paunenge uchishandisa.
Sezvo isu tichigara tichiti: patent iyo Apple faira uye kunyoresa havafanirwe kuve vechokwadi. Iyo ingori pfungwa inogona kugara mune izvo chete. Nekudaro, iyi ndeimwe yeaya mazano angave akanaka kugona kunakidzwa mune ramangwana uye izvo zvinogona kuve zvinokwezva kune vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iwe ungafungei nezve smart tambo dzeApple Watch?
Iyo yechipiri beta ye macOS Catalina 10.5.6 yevagadziri yakaburitswa
Maitiro Ekushandura Terminal Mirairo kuita Zvishandiso